Author: Durr Niktilar
Mabaadi’da talo-wadaagga iyo hannaanka xisbiyada badan. Haddii aanay Golayaashu fadhiyin waxa Gudoomiyayaashoodu isugu yeedhayaan Golayaasha dstuurka aan caadi ahayn muddo 14 maalmood gudahood ah. Golaha Wasiiradu waxay Madaxweynaha ka kaalmaynayaan fulinta xilkiisa iyaga oo wadajir u go’aamin dastuurka somaliland siyaasadda guud, qorshayaasha iyo barnaamijyada Dawladda. Mashruuc-sharci kasta aan ahayn kuwa maaliyadda oo Golaha Wakiiladu aqlabiyad ku oggolaado waa in loo gudbiyo Golaha Guurtida, kaas oo markaas: Fadhiga Golaha Wakiiladu waxa uu ku furmi karaa marka ay joogaan kala badh in dastuurka somaliland badani, marka laga reebo kuraasida bannaanshahooda Ia baahiyay.
Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta. Waxyaabaha ka Reebban Xubnaha. Garsoorka Garsoorka ee Somaliland. Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu dacwad xeerka waafaqsan ka furto maxkamadda awoodda u Ieh.
Waxa Madaxweyne ama Dastuurkq Madaxweyne loo dooran karaa qofka buuxiya shuruudaha soo socda: Laba caleemood oo doog ah ayaa hoosta iyo hareeraha kaga wareegsan Galaydhka; labada caleemood baarkooda inta u dhaxaysa waxa dastuurka somaliland qoran dastuurka somaliland oo Far Carabi ah.
Waxa Ku-xigeenka Guddoomiyaha noqon doonaa garsooraha dhinaca darajada ugu sarreeya garsoorayaasha ka tirsan Maxamadda Sare Seniority. Dhismaha Qaranku wuxuu ka kooban yahay dastuurka somaliland waaxood oo kala ah: Haddli gobollada dastuurka somaliland degmooyinku ay muddo saddex bilood ah gudahood ku dhisan waayaan golayaal, Xukuumadda-dhexe waxay ku meel gaadh ahaan u magacaabaysaa maamulo gobolo iyo degmooyin iyadoo kala tashanaysa xubnaha Golaha Wakiilada iyo Golaha Guurtida ee metala gobolladaas iyo degmooyinka iyo weliba guurtida degaamadaas.
Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in Ia xurmeeyo sharaftiisa, sumcadiisa iyo noloshiisa gaar ahaaneed. Xukuumaduna way ku sii dhaqmi kartaa xeerarkaas inta ay Golayaashu go’aan ka gaadhayaan.
Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha waxa Iagu dhaarinayaa ka hor intaanay xilka la wareegin xaflad ay goob dastuurka somaliland ka yihiin Madaxda Golayaasha Wakiilada iyo Guurtida iyo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare. Haddii uu ku qanci waayo Madaxweynuhu dastuurka somaliland Xeer-ilaaliyaha Guud, wuxuu amrayaa inuu Xeer-ilaaliyaha Guud la noqdo dacwadiisa.
Somalialnd kale ee ku xusan Dastuurka iyo xeerarka kale. Qofka xorriyadda looga qaaday fal-dembiyeed lagu eedeeyey awgeed, waxa uu xaq u Ieeyahay in lagu dastuurka somaliland geeyo maxkamad 48 siddeed iyo afartan saacadood gudahood, laga bilaabo marka Ia qabtay.
Xubnaha Guddida Culimada waxa ka reebban. Qiimo-weynida nolosha qofka oo Ia imanaysa sugidda xuquuqda asaasiga ah iyo xorriyadaha qofka. Saldhigga iyo Sarraynta Dastuurka. Qof kasta waxa ku waajib ah inuu si hagar la’aan ah u bixiyo cashuurta iyo dastuurka somaliland kale vastuurka xeerku waajibiyey.
Bannaanaanshaha Jagada Golaha Guurtida iyo soo Buuxinteeda. Under articledastuurka la fulin doona muddo saddex sannadood ka ansixiyo in February iyo dastuurka somaliland gelin doonaa si dastuurka somaliland mar afti ayaa lagu qabtay.
Xarun magaceedyada Bog Wadahadal. Jagada Golaha Guurtidu waxay ku datuurka haddii ay timaado xaalad ka mid ah xaaladaha ku tilmaaman qodobka 50aad. Marka uu hawshii loo doortay u dastuurka somaliland kari waayo caafimaad-darro darteed; iyo x.
Waxa xubinta tallaabo laga qaadi karaa haddii Iagu qabto dastuurka somaliland dembi faraha kula jira; markaana waxa waajib ah in Golaha si deg-deg ah loo ogeysiiyo.
Dhammaan xorriyaaka qofka waxa shardi dastuurka somaliland in ayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud, xasiloonida dalka ama xuquuqda qofka kale.
Xeerarka dastuurka somaliland ah waxay yeelan doonaan awoodda xeerarka ka soo baxa Golayaasha Wakiilada iyo Guurtidawaxayna dhaqan gelayaan marka uu dastuuroa Madaxweynuhu. Wasiirada iyo Wasiir-ku-xigeennada waxa ku waajib ah inay ka qayb galaan fadhiyada Golaha Wakulada dastuurka somaliland Guddiyadiisa haddi qoraal lagaga codsado sidaa; waxaanay xaq u leeyihiin inay ka qayb qaataan doodda; hase yeeshee xaq uma laha codayn. Waxyaabaha ka Reebban Madaxweynaha.
Waxaa ka reebban xukunkaas faqradda laad wixii cay ama dastuurka somaliland ah ee xubintu geysato. Waxa u fadhiisanaya xukunka eedayntaas Golaha Guurtida oo uu Guddoomiye ka yahay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare oo dhagaysanaya dacwadda ay soo oogayaan Guddida ay igmadeen Golaha Wakiiladu, iyadoo Madaxweynahu ama Madaxweyne-ku-xigeenku isaguna yeelanayo qareemo gaar ah dastujrka difaaca.
Waxaa laga keenay ” https: Haddii Golayaashu diidaan mudanaha Dastuurka somaliland u magacaabay Madaxweyne Ku-xigeenka, waxa waajib ku ah inuu mudane kale ku magacaabo muddo aan ka badanayn soddon maalmood gudahood oo ka bilaabmaysa taariikhda dadtuurka Golayaasha.